Onye isi nke alụlụ, ọrụ izizi nke Carlos Ruiz Zafón | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Onye isi nke Mist, ọrụ izizi site n'aka Carlos Ruiz Zafón
John Ortiz | | Akwụkwọ ndị ntorobịa, Novela, oké ụjọ
Onyeisi nke alụlụ ahụ - Akwụkwọ akụkọ Planeta.
Onye Isi Uche bụ obere ihe omimi na akwụkwọ ozi, onye Spanish Carlos Ruiz Zafón dere, ma bipụtara ya na 1993. Nke a bụ akwụkwọ mbụ nke onye edemede dere. Ọ na-akọwa, na mpempe akwụkwọ dị mkpirikpi na mbido akwụkwọ ahụ, na, na enweghị onye editọ, o nwere echiche ịbanye ọrụ na asọmpi akwụkwọ, nke o meriri, nke a mere ka ọ rara onwe ya kpamkpam ide.
Akwụkwọ a bụ nke mbụ n'ime Nsogbu Triji, sochiri Ulo nke etiti abalị y Ọkụ nke September. Ọrụ ahụ nwere ikuku ụgbọ mmiri nke nwere ihe omimi dị oke egwu. Isi isiokwu kpuchie bụ: mkpa ọ dị ịgafe oge, yana iji oge nke ọ bụla eme ihe; nghọta nke usoro dị iche iche mmadụ na-agabiga, ngafe site na nwata rue ọkwa tozuru etozu, ọbụbụenyi na anwansi.
1 Banyere ihe gbara ya gburugburu
2 Mmalite nke ihe omimi
2.1 Obodo ozo
2.2 Houselọ nwere ọchịchịrị n'oge gara aga
2.3 Ọhịa nwere ihe nzuzo gbara ọchịchịrị
3.1 Max akpụ ihe
3.2 Alicia ji atụ ihe
3.4 Mazi cain
4 Banyere nkata
Banyere ihe gbara ya gburugburu
Akụkọ malitere mgbe Max Carver ga-agagharị ya na ndi nne na nna ya na umu nne ya ndi ulo nke di n’akuku osimiri n’akuku obodo di n’akuku Atlantic. Nyefe a mere n'ihi agha ahụ n'etiti ọnwa June 1943, mgbe nwata ahụ dị nanị afọ 13. Max, bụ́ onye biribu n’otu ebe ruo afọ iri, chọpụtara na ihe ahụ jọgburu onwe ya, ma onye ọ bụla n’ezinụlọ ahụ nwere echiche nke ya.
Ihe na-amalite ịmalite mgbanwe dị mma mgbe Maximiliano Carver, onye na-eche nche, onye mepụtara na nna Max, na-enye gị ọmarịcha elekere n'akpa uwe a wapụtara na ọlaọcha maka ụbọchị ọmụmụ gị, naanị abalị tupu ịbanye.
Otú ọ dị, nwa okorobịa ahụ enwetụghị olileanya. Mmetụta na ihe adịghị mma lara azụ ntakịrị mgbe Max chọtara oke osimiri na nke mbụ ya mgbe ọ na-aga obodo. N’oge ahụ, o kwere nkwa na ya agatụghị ebi ebe tere aka. Nke a bụ akwụkwọ ndị ntorobịa nwere ntọala dị egwu nke ga-ejide onye ọ bụla na-agụ ya.
Mmalite nke ihe omimi
Mgbe ha rutere n’obodo ahụ, Irina, nwanne nwanyị nke obere Max, bụ nwamba nnukwu tabby, onye na-ezu ohi obi ya ozugbo. Nwatakịrị nwanyị ahụ rịọrọ ndị mụrụ ya ka ha hapụ ya, nke nwanne ya nwanyị nke tọrọ, Alicia na-achọghị. N'oge ahụ, na mgbe ị na-ele ihe nkiri ahụ, Max hụrụ na elekere obodo na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe, nke na-amasị ya.
Houselọ nwere ọchịchịrị n'oge gara aga
Mgbe ezinụlọ ahụ mere njem ogologo, ha nọ na-eche ụlọ ọhụrụ ha nke nwere ụlọ elu abụọ n'akụkụ ugwu nke ụsọ mmiri ahụ. O doro anya na ọ tọgbọ chakoo ruo afọ ụfọdụ, na iji mee ka ihe bụrụ ihe na-atọ ụtọ, Maximilian Carver na-agwa gị akụkọ banyere owuwu ya. Ihe kpatara ya n’oge ahụ E kwere ka ha gbanahụ obodo ahụ na agha ahụ, ọ bụ n'ihi na oke ọdachi mere ebe ahụ afọ ndị gara aga.
E wuru ụlọ ahụ na 1928 maka dọkịta London Richard Fleicshmann na nwunye ya Eva Gray, dika ulo okpomoku.
Ndị Fleicshmanns enweghị ụmụ, ha enweghịkwa mmekọrịta ọha na eze. Otú ọ dị, mgbe ị na-akwaga n'ụlọ osimiri, Nwanyị ahụ tụụrụ ime mgbe ọ mụsịrị nwa nwoke aha ya bụ Jekọb, na onye ha ji obi ha nile hu n'anya.
Ihe oyiyi nke onye edemede Carlos Ruiz Zafón.
Na ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke obi ụtọ ya, ọdachi bịara, maka n’afọ 1936, a hụrụ Jekọb ka ọ nwụrụ. Mmiri riri ya n'oké osimiri, ma ọ bụ ya mere Maximilian Carver gwara ha. Dị ka a ga-asị na akụkọ banyere ọnwụ ahụ bụ ihe ọ bụla, ezinụlọ Carver banyere n'ụlọ ọhụrụ ha wee malite ịtọpụ.
Ọhịa nwere ihe nzuzo gbara ọchịchịrị
N'ime usoro ịbanye n'ụlọ ọhụrụ ahụ, Max ghọtara na, n'èzí, n'akụkụ oké ọhịa, bụ ogige dị iche iche nke ihe oyiyi yiri ka ha na-agagharị.
Max akpụ ihe
13 afọ, Max nwere ọgụgụ isi ma nwee ikike dị ukwuu iji chọpụta mmetụta nke ndị ọzọ ma mee ka ndị mmadụ nwee ọ goodụ. N'agbanyeghị afọ ndụ ya, Max bụ nwa nwoke nwere ezi uche nwere ikike dị ukwuu iji dozie ihe omimi.
Alicia ji atụ ihe
Ọ bụ ada nke ezinụlọ ahụ. Ọ bụ ezie na Alicia na-efunahụ echiche nke ya na mbụ, mgbe ọ na-aga ike, ọ nwere ike ịbụ nwa agbọghọ nwere obi ike nwere nnukwu obi.
Enyi Max na ihunanya nke Alicia. Roland, 16 ma ọ bụ 17, bụ nwa okorobịa mara mma nke were Max gaa obodo ahụ. Ka oge na-aga, ya, Max na Alicia nwere nnukwu ihe omimi dị na mmiri na gburugburu ụgbọ mmiri ibu, Orpheus, dara ọtụtụ afọ gara aga n'oké ifufe.
Onye ojoo. Dọkịta Cain, ma ọ bụ Onye isi ojii, bụ onye ọjọọ na onye ọjọọ nke na-agbanwe ọdịdị ya ka ọ dị mma. Ọ na-eyi uwe ndị mara mma, anya ya na-agbanwe agba ya, ọ dịghị atụpụkwa anya. Ọ na-egosi na atụmatụ ahụ dị ka onye isi nke ndị protagonists, na-eme dị ka onye anwansi nke na-enye ọchịchọ maka mgbanwe maka nnukwu ego.
Nna nna nkuchi Roland na enyi nke Fleicshmanns. Nwoke a bụ onye na-ewu ụlọ na onye na-elekọta ụlọ ọkụ, na ọ bụ ya na-ejide mkpịsị ugodi iji chọpụta enigma nke ihe omume dị nkenke na nkata ahụ.
Akwụkwọ a nwere isi iri na asatọ, gbakwunyere ihe onye dere ya dere. N'ime egwuregwu ahụ, Ruiz Zafón na-ekpughe ihe nzuzo nke akụkọ ahụ n'ụzọ na-adọrọ adọrọ, na-adọrọ adọrọ, na mgbe ụfọdụ ụzọ melancholic.
A kpọtụrụ aha otu ndu mmadu si emebi emebi, na oge ahụ, dịka a maara ya: "anaghị adị, ọ bụ ya mere na ọ gaghị efu." Ihe odide ndị a na-ekwenye ekwenye, yana ịhụnanya, ha na-etokwa atụmatụ ahụ.
Okwu Carlos Ruiz Zafón kwuru.
Carlos Ruiz Zafón gụrụ sayensị sayensị, wee jiri onwe ya nye ụwa nke mgbasa ozi, ịbụ onye nduzi okike nke ụlọ ọrụ Spanish dị mkpa. Otú ọ dị, mmasị o nwere ịgụ ihe kpaliri ya ịrụ ọrụ ide ihe. Anya, ọ dị njọ n'ịhọrọ ụzọ a, ugbu a akwụkwọ ndị ode akwụkwọ so na ndị akụkọ kachasị mma na Spain.
Edere akwụkwọ ọgụgụ mbụ ya, nke akpọrọ "akwụkwọ ndị ntorobịa" - The Prince of Fog— nke Edebé. Ọrụ a nwere ihe dị iche: onye ọ bụla nwere uto maka ihe omimi nwere ike ịnụ ụtọ ya, n'agbanyeghị afọ ole ha dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Novela » Onye isi nke Mist, ọrụ izizi site n'aka Carlos Ruiz Zafón
Felix de Samaniego. Akụkọ ifo a họọrọ na ncheta ọmụmụ ya